★မြန်မာ့အလင်း★: သွေးပျက်ပြီး သွေးလှူကုန်ပြီ . . . ၀ါးဟားဟား
သွေးပျက်ပြီး သွေးလှူကုန်ပြီ . . . ၀ါးဟားဟား
ကျွန်ကုလားတွေ အဖြစ်က တကယ်ကို ရယ်ဖို့ကောင်းတယ်။ သနားဖို့ကလဲ ကောင်းတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံကမှ ကုလားကို မကြည်ဖြူတော့ဘူး။ နိုင်ငံ အားလုံးက ကုလားကို နှင်ထုတ်ချင်ကြပြီလေ။ အိမ်ရှင်အားလုံးက ကုလားဆိုရင် မကြည်ဖြူလို့ မျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့ နေရတဲ့ သူတို့ရဲ့ဘ၀လေးပါ။ မြန်မာပြည်မှာလဲ လူလိုမနေကြလို့ အားလုံးက ချဉ်နေကြပြီ။ ဒီကြားထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲတုံးကလဲ ကြံ့ဖွတ်နဲ့ ပေါင်းပြီး ပလီဆောက်ခွင့်ရအောင် ကြံဖန်ခဲ့တယ်။ (ပလီလဲဆောက်ခွင့်မရပဲ ကျွန်ကုလား ပိုပြီး အချဉ်ခံရတာပဲ အဖတ်တင်တယ်) အခုတော့ . . လူမြင်ကောင်းအောင် . . .သွေးလှူကြတယ်ဆိုပဲ။ ၀ါးဟားဟား။ သနားလိုက်စရာပဲကွာ။
ဘာလဲ? . . . .ဘာလုပ်တယ်?. . သွေးလှူကြတယ်ဆိုပဲ။ ၀ါးဟားဟား။ အေးပေါ့ကွာ . . . စာမတတ် ပေမတတ် ဒီမိုငတုံးတွေက မင်းတို့ လိမ်ညာတာကို အဟုတ်ထင်ကြမှာပဲ။ ဖာသည်မလောက်မှ အရှက်နဲ့ သိက္ခာမရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေကလဲ သတင်းစာထဲမှာ ထည့်ပြီးကြေငြာပေးမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် စာတတ်တဲ့သူတိုင်းက သွေးလှူတဲ့ကိစ္စလို မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်ကို မွတ်ဆလင်ဘာသာက ခွင့်မပြုဘူးဆိုတာ သိကြပါတယ်။ ဘာသာခြားတွေကို သွေးလှူပြီး အသက်ကယ်ဖို့ နေနေသာသာ အပေါင်းအသင်းလုပ်ရင်တောင် Allah က အပြစ်ပေးမယ်လို့ Quran ကျမ်းထဲမှာ အတိအလင်းရေးထားတာပဲ။ မွတ်ဆလင်ဘာသာက လိမ်ညာ ဟန်ဆောင်ဖို့ (Taqiyya) သင်ပေးထားတော့ လိမ်ညာကြတာ မဆန်းပါဘူးလေ။
စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးကတော့ သွေးလှူတဲ့နေရာမှာ Quran ကျမ်းစာကို ရွတ်တယ်ဆိုပဲ။ Quran ကျမ်းရဲ့ ဘယ်အပိုဒ်ကို ရွတ်လဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ အဲဒီကျမ်းထဲမှာက သတ်ဖို့ ဖြတ်ဖို့နဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ပဲ ရေးထားတာ။ လူတွေက အာရပ်လို ရွတ်တာကို နားမလည်ကြတာ အဆင်ပြေသွားတယ်။ စဉ်းစားကြည့်နော် အာရပ်စကားသာနားလည်ရင် . . . .သွေးလှူတဲ့နေရာမှာ မုဒိမ်းကျင့်ပါ . . . ခေါင်းဖြတ်ပါ. . . ခြေဖြတ်သတ်ပါလို့ အော်နေတာကို သိကြရင် ၀ိုင်းပြီး ဟားတိုက်ကြမှာပဲ။ ယုတ်ညံ့တဲ့ဝါဒီတွေက မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ရတယ်လို့ကွာ။ မိုးကြိုးတော့ ပစ်ကုန်တော့မှာပဲ။ ခက်ပါ့။
ဘာလဲ . . အဲလောက် ဟန်ဆောင် ပဲများနေရအောင် . .မင်းတို့တွေ အဖိုးအဖွားတွေနေခဲ့တဲ့ ကုလားပြည်ကို ပြန်ပို့ခံရမှာ သိပ်ကြောက်နေသလား? မင်းတို့ ညီအစ်ကို မွတ်ဆလင်တွေရှိတဲ့ နိုင်ငံကို ပြန်ပို့ခံရမှာ သိပ်ကြောက်နေသလား? မွတ်ဆလင်ဖြစ်ရတာ တော်တော်ကို ကံကောင်းတာပဲနော်။ ၀ါးဟားဟား။ ကဲကဲ. . . မူယာ. မာယာများပြီး သွေးလှူနေတဲ့ ကျွန်ကုလားတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ကြပါဦး။ သွေးပျက်တဲ့ ကုလားတွေကို ဟားတိုက်ကြပါဦး။ ၀ါးဟားဟား။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 8:24 AM
koko aung said...
ကုလားနှင့် ဆက်ဆံသူ မြန်မာ တိုင်းရင်းသား
အားလုံး၏ ရန်သူ စစ်စစ်ဖြစ် သည်
Htoo Lay said...
ငါတို့မြေပေါ်မှာနေပြီး ငါတို့ကိုစော်ကားနေတဲ့ ကုလားက...
ဗီဒီယိုအသစ်: မွတ်ဆလင်စစ်တပ်က ခွေးလိုရိုက်တယ်။ အရို...
ချေမောလှပတဲ့ ရခိုင်သူ ရွှေသျှိုင်ကပြောတယ်. . . သာက...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ရခိုင်များအတွက် ဒါကိုဖတ်လိုက်ပါ
ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့ မြန်မာတွေကပြောနေတယ် . ....
အာလာ၏ ဆန္ဒတော်နှင့်အညီ လစ်ဗျားမှ ကျွန်ကုလားများ အသေ...
သင်္ကြန်ရေနဲ့အတူ ပါးစပ်သမားတွေ ပပျောက်ပါစေ